Zvikumbiro zvekutora mavhidhiyo eYouTube | IPhone nhau
Iyo vhidhiyo yeYouTube chikuva chave chinhu chishuwo kumakambani mazhinji, kunyangwe hazvo vasina kunetsekana kubvunza Google kuti ongororo yavo ingave yei. Ko kana ivo vari kuyedza, nekubudirira kwakasiyana, mamwe makambani senge Facebook neTwitter kugadzira mapuratifomu matsva evhidhiyo, umo vashandisi vanogona kuisa mavhidhiyo avo kuti vagovane navo nemunhu wese. Asi, Tinogona sei kutora mavhidhiyo eYouTube kubva ku iPhone?
Kubva mamwe makore, chimiro cheYouTuber chave chakakosha mbiru yeiyo Google vhidhiyo chikuva. Kune vazhinji veYouTubers vanotaurirana vakazvimiririra chikamu chemari yavanowana kubva mumaonero avo mavhidhiyo avanogashira, nekuti havana zvibvumirano zvezvikwata zvakasiyana zvinovatsigira.
Kana iwe uri fan yeYouTube uye unogara uchitarisisa yazvino vhidhiyo kubva kune yako yaunoda YouTuber, Zvichida kuti pane imwe nguva wakamboda kurodha pasi imwe yevhidhiyo yake kuti uitumire kushamwari kana nhengo yemhuri, kana kungoiona paunenge uchienda kunoshanda nepasi pevhu kana bhazi kuti usashandise yako data chiyero.
Iwe unogona zvakare kuda kutanga shandisa chishandiso chitsva, Uye sezvo isu tichigona kuwana zvese paYouTube, tinoshandira paGoogle vhidhiyo sevhisi kuti tione iwo anowanikwa ezvidzidzo uye nekudaro tora navo kuti vatarise uye vagare vainavo varipo, pasina zvinoenderana neInternet kubatana kana kutambura zvakataurwa ma ads anotiratidza iyo chikuva, pasina izvo isu hatingave nemukana wekunakidzwa neYouTube. Zvese zvine mutengo.
Kune vese avo vashandisi vanoda kurodha mavhidhiyo azvino kubva kune avo avanofarira YouTubers, makomisheni ekudzidzira pazvishandiso kana kuda kugadzira raibhurari yakakura yemavhidhiyo ekatsi (iyo mhuka mhuka yeYouTube), saka tiri kuzokuratidza akati wandei kunyorera kurodha YouTube mavhidhiyo nekukurumidza uye nyore, zvese pasina Jailbreak uye kana mudziyo wako unayo.
Kunyangwe chiri chokwadi kuti muApp Store tinogona kuwana nhamba hombe yekushandisa iyo inotibvumidza kurodha mavhidhiyo edu aunofarira, muchinyorwa chino Isu tichataura nezve mafomu anga ari muchitoro chekushandisa kwenguva refu yeApple uye kuti vanotipa garandi yakakura pamberi pekugona kwekuti Google ikumbire kubviswa kwayo, sezvo mazhinji acho, kana asiri ese akabhadharwa.
Ino haisi yangu yekutanga kutumira nezve mafomu ekurodha pasi mavhidhiyo eYouTube, uye nekufamba kwenguva ndakakwanisa kuona kuti sei aya marudzi emaapplication anobviswa nyore nyore kubva kuApp Store, saka ini ndoda kupa imwe nzira kuchinyorwa chino kuitira kuti posvo ibatsire munguva (yezvishandiso zvandinosanganisira) uye haina basa zvachose kana mwedzi mishoma yapfuura uye mafomu mazhinji atsakatika kubva kuApp Store.
1 Maitiro ekudhawunirodha YouTube mavhidhiyo pasina jailbreak
1.1 Amerigo Turbo Bhurawuza
1.2.1 Dhawunirodha YouTube mavhidhiyo neKufamba kweBasa
1.4 Mhepo Download PE
1.5 Zvinyorwa 5
2 Maitiro EkuDhawunirodha YouTube Vhidhiyo neJailbreak
2.2 Cercube yeYouTube
2.3 Sango Vhidhiyo Downloader
Maitiro ekudhawunirodha YouTube mavhidhiyo pasina jailbreak
Ichi chishandiso, icho chinowanikwa mune yemahara lite vhezheni ine ma ads uye zvimwe zvikwereti uye zvakabhadharwa pasina chero muganho, ndiyo yandaigara ndichishandisa kurodha kwete chero chero YouTube vhidhiyo, asiwo inokutendera kuti utore chero mhando yevhidhiyo iyo inoratidzwa mune yakasanganiswa browser.
Iko kushanda kweichi chishandiso kuri nyore kwazvo, nekuti isu tinongofanirwa kuvhura iyo yekushandisa browser uye nekuenda kune vhidhiyo yatinoda kurodha pasi. Chiratidzo chinongoerekana chaonekwa chinoratidza kuti vhidhiyo yaonekwa uye kana tichida kuitora. Yekumhanyisa kumhanyisa kunoenderana newebhusaiti yatinoshanyira uyezve nekureba kwayo. Kudhanilodha YouTube mavhidhiyo kubva ku iPhone, iPad kana iPod touch kwakanyanya kukurumidza. Ichi chishandiso chine chiyero chepakati chenyeredzi ina kubva pa4, izvo zvinoita kuti ive imwe yeanonyanya kukurudzira mafomu ekurodha pasi mavhidhiyo eYouTube.
Amerigo File Managervakasununguka
Mumavhiki mashoma apfuura, Workflow yasununguka zvachose, sezvo vakomana veCupertino vatenga kambani yakanga yagadzira. Kufamba kwebasa kunotibvumidza isu kuti tigadzire kudzokororwazve kwekufashukira mukuwedzera pakukwanisa kugadzira nzira dzakasiyana dzekuita mabasa ari natively zvisingaite, senge mukana wekutora mavhidhiyo eYouTube. Kana iwe uri nyanzvi muKufamba Kwebasa uye uine yakawanda yemahara nguva, iwe unogona kugadzira iyo yekufambisa yega iwe kuti ugone kurodha YouTube mavhidhiyo. Asi mukati Iyi link, unogona kudhawunirodha rukova uye kurimisikidza pafoni yako kuti ukwanise kurodha mavhidhiyo pasina dambudziko
Dhawunirodha YouTube mavhidhiyo neKufamba kweBasa
Kuti utore mavhidhiyo eYouTube neKufamba kweBasa, unofanirwa kuvhura peji rewebhu muSafari mune iyo vhidhiyo, kungave nekuteedzera nekuinamira kubva kuchishandiso kana nekushanyira webhusaiti yeYouTube kubva kubhurawuza.
Paunenge uchinge uchitamba vhidhiyo yaunoda kurodha pasi, tinya pane bhatani reKugovana muS Safari uye sarudza Run Workflowflow uye sarudza Rodha YouTube
Ipapo iko kunyorera kuchazotanga kuita nhanho dzese dzinodiwa dzekutora vhidhiyo. Kana ichinge yapedza, vhidhiyo yacho icharatidzwa ichitipa sarudzo yekuigovana kana kuichengeta patiri.
Yakazara ndeimwe yeanoshanda maapplication anotibvumidza kurodha pasi chero zvemukati zvatinowana paInternet mumavhidhiyo fomati. Iko kunyorera kunosanganisira bhurawuza yatinofanira kushanyira iwo mapeji anowanikwa mavhidhiyo. Kana kutamba kwatanga Chiratidzo chinoratidzwa chinoratidza kuti iwe wawana vhidhiyo uye uchitipa isu sarudzo yekuirodha pasi. Zvese zviri maererano ne aesthetics uye nemabasa ayo aanotipa, tinogona kutaura kuti ikoponi kabhoni yeAmerigo, chekutanga chikumbiro chandakambotaura nezvacho. Yese inowanikwa muApp Store mune maviri maBhaibheri: imwe yakabhadharwa uye imwe yemahara nemipimo uye kushambadzira. Ivhareji mamaki ekushandisa uku ndeye 4,5 nyeredzi kubva pa5, iine mamwe akawanda ongororo (1429) kupfuura Amerigo (738) uye mutengo wezvose zviri zviviri zvakafanana.
Yese mafaera pro5,49 €
Mhepo Download PE
Chikumbiro chiri nyore uye pasina chero sarudzo dzekumisikidza, yatinogona kurodha nayo chero vhidhiyo yeYouTube, asi zvakare, tinogona kuishandisa kurodha mafaera muPDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, ZIP ...
Mhepo Download PE1,09 €
Kunyangwe ichi chishandiso chisina kuitirwa kana kugadzirirwa kurodha YouTube mavhidhiyo, asi kuti utore mafaera kubva mugore uye uachengete pane yedu kifaa, Tinogona zvakare kuishandisa kurodha YouTube mavhidhiyo. Kuti tidaro, isu tinongofanirwa kuenda kubhurawuza rekushandisa uye nekuisa iyo URL yeYouTube vhidhiyo, iyo yatinogona kuwana zvakananga kubva kuGoogle application yepamutemo.
Kana vhidhiyo yacho yatinoda kurodha pasi yakaiswa mubrowser, tinobva tadzvanya pane iyo URL uye tichachinja "m." pasina makotesheni e "ss". Tevere, savefrom.net webhusaiti ichavhura nevhidhiyo iyo yatinoda kurodha pasi uye nekwatinozoita sarudza hunhu hwatinoda kurodha muvhidhiyo. Kana yangotorwa pasi, vhidhiyo inozochengetwa muforodha yekuodhaunirodha, kubva kwatichakwanisa kuichengeta pane reel kana kuigovana kuburikidza nesarudzo dzakasiyana dzinopihwa nechishandiso.
Maitiro EkuDhawunirodha YouTube Vhidhiyo neJailbreak
YouTube ++ ndeimwe yevakanyanya veteran, sezvo yanga iri paIOS ichitibvumidza kurodha kwete chete edu epamoyo mavhidhiyo eYouTube, asi zvakare inotibvumidza isu kutamba kumashure kwedu zvinyorwa zvedu kubva kuYouTube vhidhiyo sevhisi, mukana wekuisa zvirimo zvakananga kubva ku iPhone yedu, vharidzira chero mhando yekushambadzira kungave muchimiro chevhidhiyo kana banner mukuwedzera pakubvisa zera rinorambidzwa.
Izvo zvinotibvumidza isu kudzora yekutamba kumhanya, kudzokorora mavhidhiyo otomatiki, kurodha kwete chete mavhidhiyo asiwo odhiyo zvakasununguka. YouTube ++ inotibvumidza kurodha pasi mavhidhiyo anosvika ku1080 pa60 fps, chimwe chinhu icho mashoma mashandisiro anogona kuita nhasi YouTube ++ inoenderana neIOS 7, 8, 9 uye 10 uye inowanikwa paBigBoss repo yemahara.
Kufanana neYouTube ++, kubva nhasi ndiwo chete ma tweaks anoenderana neIOS 10. Cercube inotibvumidza kurodha mavhidhiyo mune 4k mhando kana chete odhiyo, inotibvumidza kudzora kurodha pasi kunoitwa mukati mekushandisa kuti tigovane navo gare gare mukuwedzera kune vekunze mavhidhiyo uye maodhiyo faira. Inoenderana neMufananidzo muPikicha basa, inobvumira vhidhiyo loop kutamba, yakatsaurira mabhatani kufambisa kana kunonoka kutamba pamwe nekudzora kumhanya kwayo. Cercube yeYouTube inowanikwa mahara kurodha pasi kuburikidza neBigBoss repo uye inoenderana neIOS 10.
Sango Vhidhiyo Downloader
Jungle inokwanisa kurodha kwete chete YouTube mavhidhiyo asi zvakare inotibvumidza kurodha chero vhidhiyo kubva kune chero peji rewebhu ratino shanyira. Jungle ibhurawuza iyo inotipa isu fanano yakafanana kune TubeMate yeApple. Sezvo isu tichiwana vhidhiyo yatinogona kurodha pasi, bhatani reDownload richaonekwa padyo nayo. Naizvo tinogona kumisa otomatiki kurodha pasi kuitira kuti irodhe chero vhidhiyo yatinowana tichitsvaga, chimwe chinhu chingave chinonakidza kana tichida kurodha pasi rakazara playlist.
Jungle - Vhidhiyo Downloader haisati yatsigirwa zviri pamutemo pane iOS 10, asi zvinoenderana nemusimudziri inoshanda zvisingaite chero matambudziko ekuita. Tinogona kurodha pasi iyi tweak kuburikidza neModmyi repo, yakaiswa nekusarudzika muCydia. Iyo zvakare yemahara.
Iyi Cydia app isina kuvandudzwa kubva muna Nyamavhuvhu 2015, saka haisi sarudzo yakakurudzirwa yezvishandiso zvine vhezheni yakakwira kupfuura iOS 8, kunyanya nekuda kwekugadzikana uye matambudziko ekuita ayo aanogona kupa. Inowanikwa pane BigBoss repo.
Developer yarega kuvandudza uye kugadzirisa kweichi chishandiso, saka zvinowirirana chete neIOS 7. Kana iwe uine iPhone 4 iyi tweak inogona kunge iri iyo yauri kutsvaga, nekuti zvingangoita kuti mamwe ese maapplication akaratidzirwa muchinyorwa chino haashande pane chako kifaa. Inowanikwa pane BigBoss repo.
Imwe tweak yanga yave iri yakasiiwa nenjere pasina kupa kuenderana kana ne 64-bit processor kana nemaitiro matsva ekushandisa. InTube inowirirana chete neIOS 7 nepo Intube 2 inongowirirana neIOS 8. Inowanikwa pane BigBoss repo.
Kana iwe uri mushandisi wejeri, zviri pachena kuti Cercube kana YouTube ++ ndiyo sarudzo dzakanakisa, nekuda kwemikana iyo inotipa patinosarudza mhando yevhidhiyo yatinoda kurodha pasi. Kana, kune rumwe rutivi, isu tisingashandise iyo jailbreak, iyo yakanakisa sarudzo ndeye Workflow, sezvo pamusoro pekusununguka, zvinotibvumidza kuti tizvishandise kugadzira kumwe kufashukira kwemabasa kunogona kubatsira zuva nezuva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Zvikumbiro zvekutora mavhidhiyo eYouTube
Ndatenda, zvinobatsira kwazvo.
Wakanganwa YouTube ++
Ndiyo yekutanga kunyorera zvishandiso zvine Jailbreak zvandakaisa mune rondedzero. Hatina kukanganwa.
Kufamba kwebasa kunongondiratidza mufananidzo usina chinhu. Mumwe munhu zvinoitika?
Iwe waita nhanho dzese sekutsanangura kwandakaita muchinyorwa?
Ini ndakaiyedza pane akasiyana zvishandiso uye pasina dambudziko.
Kwazisai ... Chekutanga pane zvese ini ndinofanira kutaura kuti yakanaka kwazvo posvo !!! Ndatenda nekuyedza kutichengeta tiri padanho maererano netekinoroji, kunyanya Apple iri kunetsekana ... ndichangoverenga iyi positi ndakatanga kuona mamwe maapplication auri kutaura nezvayo uye Workflow inondisimbisa nekuti haingoshandire chete mavhidhiyo asi kune zvimwe zvinhu zvakawanda.Mubvunzo wangu ndewekuti ... pandino dhawunirodha vhidhiyo kubva mairi, zvinongoerekana zvaenda kune reel uye hazvioneke muTV app ... pane imwe nzira yekugadzirisa mavhidhiyo kuti aoneke paTV app kana ivo vanogona chete kutambiswa kubva kune reel? Ini ndinotaura izvi nekuti kubva kune reel haugone kumbomira kana kufambira mberi kana kunonoka vhidhiyo .. kana iwe uchikwanisa kundibatsira .. ndatenda pamberi !!!
Tarisa uone kana nekumisikidza Mapikicha angu Mukushambadzira iwe unogona kuiwana kubva kuApple TV. Paunenge wamiswa, dhawunirodha vhidhiyo zvakare uye mirira maminetsi mashoma kuti uone kana ichiisa kune iwo mafoto mukutenderera.
Zvakanaka izvo zvinogadziriswa ... gare gare kubatanidza nharembozha yangu kune pc uye kupfuudza vhidhiyo yacho kwandinoda .. ndanga ndichiedza kuyedza iyo AirDownladed PE uye hapana nzira yekuodha vhidhiyo .. ndakarova chinongedzo uye icho inovhura bhurawuza neiyo vhidhiyo asi kana iwe ukabaya iyo, zvinobva zvabuda muapp zvakananga kuYouTube pasina mukana wekutora chero sarudzo .. yakapusa chirongwa asi chakaomarara kuti chishande ...
Ndingadai ndakaisa zvimwe, asi ndafunga kutarisisa chete kune maapplication anga ari muApp Store akareba, nekuti idzi mhando dzekushandisa dzinouya dzichienda.
Kugadzirisa komendi yapfuura ... Ini ndakakwanisa kuita kuti vhidhiyo itambe mukati mebrowser yeapp asi usambondipa download link yeiyo vhidhiyo ...
MXtube inoramba ichindishandira paIO 8 pa iphone 6
Apple inoburitsa iOS 10.3.2, watchOS 3.2.2 uye tvOS 10.2.1 betas
Multi-mushandisi uye Mufananidzo-mu-Mufananidzo paApple TV? Maererano nerunyerekupe kana